Ungawukopa njani uMfanekiso okanye iVidiyo kwiifayile ukuya kwiifoto kwi-iPhone okanye kwi-iPad
Ukuba ulayishe imifanekiso okanye iividiyo kwi
usetyenziso kwi-iPhone yakho okanye kwi-iPad, usenokuzibuza ukuba ungazikopa na kwithala leencwadi. Impendulo nguewe, kwaye siza kukubonisa ukuba ungayenza kanjani. Kuqala, vula usetyenziso lweefayile kwaye uhambe uye kwifolda eneefayile zemithombo yeendaba ofuna ukuzihambisa kwiifoto. Kumzekelo wethu, sisebenzisa ifolda yokukhuphela, kodwa iifayile zinokukhutshelwa ngokulula kwezinye iifolda ezikwiifayile, ezinje ngeDropbox okanye yakho
Ukuba sele ufumene iifayile zeendaba, unokukhetha ezahlukeneyo.
Ukuba ifoto enye okanye ividiyo, cofa kuyo ukuvula umbono wayo oneenkcukacha.
Ukuba ufuna ukukhetha iifayile ezininzi kwi-iPhone enye, cinezela iqhosha lamachaphazaMisa (amachaphaza amathathu kwisangqa) kwikona ephezulu ngasekunene kwesikrini kwaye ukhethe "Khetha". (Kwi-iPad, cofa nje "Khetha.") Emva koko, phawula izinto ofuna ukuzikopa kwiifoto.
Nokuba kunjalo, xa sele unento enye evulekileyo okanye uninzi olukhethiweyo izinto, cinezela iqhosha u "Yabelana", elijongeka njengoxande olurhangqiweyo kunye notolo olukhombe kulo. Kwi-iPad, kwikona ephezulu ngasekunene kwesikrini. Kwi-iPhone, ibekwe kwikona esezantsi ekhohlo.
Kuluhlu lwezabelo oluvelayo, cinezela "Gcina umfanekiso "okanye" Gcina ividiyo ". Ukuba ukhethe izinto ezininzi, cinezela "Gcina izinto X", apho u-X linani lezinto ozikhethileyo.
Ixesha elizayo xa uvula isicelo sakhoIifoto, uya kubona imifanekiso okanye iividiyo ozigcine kwiifayile ezikwi-albhamu yakho "yakutsha nje". Ngendlela, le nkqubo ihamba zombini iindlela. Ukuba ufuna ukukopa iifoto okanye imifanekiso kwiifoto ukuya kwiifayile, khetha kwi-app yeefoto, cofa u-Yabelana, emva koko ukhethe u "Gcina kwiifayile". Unokusebenzisa le ndlela ukukopa imithombo yeendaba kwi-iCloud yakho okanye kwiDropbox drive. Ikopi elungileyo!
UNXIBELELWANO: Yonke into onokuyenza ngeFayile yeapp kwi-iPhone yakho okanye kwi-iPad